10 Iindawo ezimnandi ze-LGBT eziHlobo | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Iindawo ezimnandi ze-LGBT eziHlobo
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Train Travel Holland, Uloliwe kuhambo Italy, Train Travel The Netherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
Ixesha lokuFunda: 8 imizuzu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 14/05/2021)
Nokuba uyi-diva, Umfazi wefashoni, Ukumkanikazi, isitabane, isini lesini, okanye ungakulungelanga ukuzichaza, la 10 iindawo ezimangalisayo ze-LGBT ziya kujoyina zikubhiyozele. Ukusuka ekuphuzeni eParis ukuya kwitheko njengenkwenkwezi yedwala eBerlin, ezi zixeko zaseYurophu ezimangalisayo zimalunga namalungelo alinganayo, ikratshi, nothando kuyo yonke imibala yomnyama.
1. Iindawo eziyoyikekayo ze-LGBT kwihlabathi: Berlin
Yonke le nto yaqala ngesiseko sombutho wokuqala wesini kunye nowesini kwihlabathi. 1897 Ngunyaka ophawule inyathelo lokuqala Inguquko yaseBerlin yenzeka kwikomkhulu lamafanasini kunye nelobungqingili.
Ubuhle nothando ziza ngeendlela zonke, imibala, kunye nesondo. IBerlin yenye yezona zinyamezelayo, vula, kunye nokwamkela izixeko ehlabathini. IBerlin yindawo entle ye-LGBT eYurophu kwaye yamkela Zonke iintlobo zothando. namhlanje, IBerlin yeyona ndawo yokugqibela ye-LGBT, kodwa izuze ukuthandwa kwayo kuphela kwinkulungwane ye-20, inomtsalane kakhulu kwindlela ende eyenziweyo isixeko.
INollendorfplatz eSchoneberg yintliziyo kunye nomphefumlo wasendle wendawo eyaziwayo yesini gay eBerlin. Apha, ungenza itheko, eyakho, nomnikelo, kwaye wonwabele ubomi be-LGBT kunye nenkcubeko.
Elona xesha lilungileyo lokufumana i-LGBT extravaganza lihlobo lasehlotyeni, kwi-epic CSD Berlin. Phantse 1 Isigidi sabantu kunye namakhulu eeflethi ezihonjisiweyo zenza enye yeendlela ezinkulu zokuzingca kwihlabathi, amalungelo alinganayo kunye nenkululeko yokuthanda kuyo yonke imibala yomnyama.
Izinto eziPhambili ekufuneka uzenzile
Ndwendwela imyuziyam yaseSchwules, isikhumbuzo sokuqala sentshukumo yamafanasini, ibhari yaseMarietta edumileyo, Ikhefi iBerio, iklabhu endala yesitabane iHeile Welt, okanye elona qela lilungileyo leKitKat-Klub.
2. Indawo eyoyikekayo ye-LGBT eNetherlands: Amsterdam
Xa ulilizwe lokuqala emhlabeni ukwenza umtshato wesini esifanayo, ukwenye yezona ndawo zintle kakhulu kunye ne-LGBT kwihlabathi. ke, fun and Amsterdam emangalisayo yaba isixeko sokuqala eYurophu ukusingatha le Gay Imidlalo e 1998 kwaye ikratshi laseAmsterdam lithathwa njengelona libalaseleyo kwihlabathi.
Ukuba awazi ukuba zeziphi iindawo oza kubetha kuzo esixekweni, yima nge Indawo epinki, indawo yolwazi malunga ne-LGBT- iindawo ezinobungane eAmsterdam. IAmsterdam iyamangalisa Indawo yobusuku, kodwa ngaphambi kokutshona kwelanga, kufuneka uhambehamba kwizitrato ezilandelayo kunye neendawo, apho umbono we-LGBT uphefumla kwaye ukhaba: AbaLawuli, Kerkstraat yimbali, Amstel, emva koko kuZeedijk naseWarmoesstraat yemiboniso emnandi yasebusuku ye-LGBT eAmsterdam.
Fumanisa indawo edume ngokurhuqa kwiNtloko yeKumkanikazi, sela kwi-cocktail kwi-Getto, fumana ukhuthazo kwivenkile yeencwadi ye-LGTB yaseAmsterdam, Ukuzonwabisa, kunye nepati kwiiTaboo okanye kwiiklabhu zokuphuma kwisitalato iReguliersdwarsstraat. Ukwengeza, Ibhongo le-Amsterdam linomnye weendlela ezizezona zibalaseleyo zokundwendwela kwihlabathi.
3. Indawo eLungele ukuHanjiswa kwe-LGBT e-UK: Brighton
Ukusukela ngeminyaka yoo-1930 iBrighton ibiyindawo ekhuselekileyo kuye wonke umntu ekufuneka ephonononge isini sabo. Idolophu eyayiselunxwemeni yolwandle iye yaba yindawo efanelekileyo ye-LGBT e-UK, kufutshane kodwa ukude nekomkhulu.
Indawo yaseKemp Town yindawo ye-LGBT eBrighton, Enkosi kwiihotele zayo ze-boutique, pubs, neendawo zokutyela. Apha, uya kufumana i-vibes emangalisayo, umoya obandayo apho ungabhiyozela uthando ngazo zonke iindlela. Ngaphezu, ukuba ucwangcisa ukuhamba yonke indlela kunye nesithandwa sakho, emva koko iBrighton ineendawo ezininzi zomtshato ezinjengeRoyal Pavilion, kwaye ngqo ukusuka apho kuqala imithendeleko eCharles Street okanye eBrighton elwandle.
Yonwabela ipeyinti kwisitabane i-Bulldog pub, kodwa qala ukhululeke kwiBrighton Sauna, kwaye ugqibezele ubusuku kwiRevenge, iklabhu yasebusuku ephezulu ye-LGBT.
4. Isixeko esiBalaseleyo se-LGBT eJamani: Cologne
Isixeko esinee-pubs ezininzi kunabantu, kunye neziganeko zebhongo ngakumbi kunayo nayiphi na enye indawo, ICologne yenye yezona ndawo zintle kunye ne-LGBTQ eYurophu. I-Cologne i-LGBTQ-inobuhlobo kangangokuba inehambo yayo yeGaily, ukuze ufumane iimfihlelo zesixeko ezigcinwe kakuhle kuyo nayiphi na incasa kunye nombala womnyama.
Ukwengeza, I-cologne yeyona ndawo ilungileyo ye-LGBT, kuba ikwenzile 2 izigcawu zesini, ewe ichanekile. I-Heumarkt-Mathiasstrasse endala kunye ne-Bermuda Triangle yasezidolophini kwisihlwele esincinci. Intshona inamaqela amahle kunye neeklabhu zokudanisa ukuze unyikimise umzimba wakho kunye nempuma ye-hangout yeklasi kunye neendawo zemveli ze-hangout.
Awunalo ixesha lokutyelela zombini? Akukho maxhala! Kuba uloliwe ophantsi komhlaba u-S-Bahn, unokuhamba uye emva nangamaxesha amaninzi njengoko unqwenela kwaye ukhawuleze kakhulu.
Ungaphuthelwa yiCologne's Christopher Street Day, Ukuziqhenya kweCologne eyaziwayo kwihlabathi jikelele. Ukwengeza, Imakethi yeKrisimesi yeGay yaseCologne, kunye neCarnival ngoFebruwari. Ukulungiselela emva komthendeleko ukuphuma kweDisk 5 okanye Amadeus.
IBerlin iya eAachen ngoololiwe
IFrankfurt ukuya eCologne Kunye noLoliwe
Dresden ukuya eCologne ngoololiwe
I-Aachen iya eCologne ngoLoliwe
5. Indawo eyoyikekayo ye-LGBT eFrance: Paris
Esona sixeko sithandanayo emhlabeni sibhiyozela uthando yonke imizuzu yomhla ngamnye, kwaye wamkelwe kakhulu ukubhiyozela uthando lwakho kuyo yonke imibala yomnyama. Igcwele ngobuqaqawuli, isitayile, iklasi, kwaye kumnandi, IParis yenye ye-LGBT eyoyikekayo- Iindawo ezinobuhlobo emhlabeni.
IMarais ethandekayo liziko lendawo yobufanasini eParis, ngazo zonke iindawo ezithandwayo ze-LGBT ezikwiNdawo yeLa de Bastille edumileyo, IRiphabhlikhi yesikwere, kunye nehotele de Ville. Kuwo wonke unyaka, ukusuka kuJanuwari ukuya kuJulayi, kukho iminyhadala emangalisayo enikezelwe kuluntu lwe-LGBT: mikhosi, ubugcisa, film, Kwaye ke ikratshi libonisa. Apha, uyakuziva usekhaya, kwaye uneendlela ezininzi zokujonga indawo ye-LGBT yaseFrance kwaye ufumane iParis.
I-Raidd Barn yabadanisi bokuhamba-hamba kunye nomdaniso oshushu, Ikhefi likaDebonair eluphahleni lweCite de la Mode et du Uyilo lweemacaroon kunye neembono ezimangalisayo zeSeine, kunye neBadaboum bistro kwisithili saseBastille kubo bonke amagcisa aseFrance amatsha, kunye no-Eiffel Tower ngasemva.
6. Isixeko esimangalisayo se-LGBT e-Austria: Vienna
Imbali etyebileyo yase-Austrian kunye nenkcubeko zigcwele ngamabali malunga nabalawuli bezitabane, ke ukuba yi-LGBT- Ubuhlobo yinxalenye yale dolophu intle ye-DNA. ngoko ke, Akumangalisi ukuba eVienna ungaqhubeka 2 Ukhenketho lwedolophu yamaGay ukufumanisa imbali yoluntu lwe-LGBT kunye nobomi. Ukwengeza, ngokufanayo nezinye iindawo ezinobuhlobo ze-LGTB kuluhlu lwethu, zininzi iziganeko ze-LGTB kunokuba ungazibala unyaka wonke.
Esinye seziganeko ezikhethekileyo ze-LGBT zonyaka yiBhola yomnyama. Ihotele iSchonbrunn ibamba ibhola enkulu, apho ungadanisa khona iWaltz kwaye ubonise indlela ocinga ngayo yefashoni kwiimpahla ezimangalisayo zebhola kunye nee-tuxedos.
Ngcamla ikofu yaseViennese eCafe Savoy, Itheko kunye noNkosazana Candy kwiklabhu yaseVienna yaseZulwini, Ndithi ndenze ngendlela efanelekileyo yeAlpine, kwaye uthathe iifoto zakho zomtshato xa ubugcisa obumangalisayo besixeko bukujikelezile.
7. Isixeko esimangalisayo se-LGBT eIreland: Dublin
Mhlawumbi i-Ireland yaziwa ngabaninzi ngokungqongqo, zenkolo, kunye neqhwa ngexesha. kunjalo, Akunjalo ngeDublin enamandla, kumnandi, kwaye kakhulu LGBT- friendly. in 2015, umtshato wamafanasini waba semthethweni, isiganeko esimangalisayo kwinguqu eIreland yaba yinkululeko, kunye nesizwe esivulekileyo.
Ngaloo ndlela, uya kufumana iDublin enye i-LGBT emangalisayo- indawo enobuhlobo eAmsterdam kunye neberlin. NgoJuni yinyanga yokuzingca eDublin, kodwa kuya kufuneka ujonge uMnyhadala weHlabathi weDublin Gay Theatre, eyona inkulu ehlabathini.
Cocktails okanye amaqela eGeorge Bar, iziko lesini gay eDublin, IPantiBar, I-Oscars ikhefi, Ukuhamba ngeenqanawa, okanye i-sauna ye-gay yokuphumla zezona zinto zokugqibela ekufuneka uzenzile ukonwabela ngokwenene indawo emangalisayo ye-LGTBQ eDublin.
8. Indawo eyoyikekayo ye-LGBT: Bheljiyam
IGhent neBrussels zaziwa njenge 2 Ezona ndawo zimnandi ze-LGBT eBelgium. Eli lizwe lalilelesibini ukwamkelwa ngokusemthethweni kwabantu besini esinye. EBrussels, I-Rue du Marche okanye iCharbon liziko lemeko ye-LGBT.
Umzekelo, kwiNdlu yeRainbow, ungonwabela umnyhadala wefilimu waseLesborama, imiboniso, kunye neminye imisebenzi emininzi yenkcubeko. kunjalo, ukuba ufuna ukubonisa into oyinikwe ngumama, emva koko uChez Maman wamkela ii-divas kuyo yonke imibala kunye nokubengezela komnyama.
Luxembourg ukuya eBrussels Kunye noLoliwe
Antwerp eBrussels Ngololiwe
IAmsterdam ukuya eBrussels Kunye noLoliwe
EParis ukuya eBrussels Kunye noLoliwe
9. Indawo eyoyikekayo ye-LGBTQ: London
Ukuphela kweNtshona, pubs, bokwakha, ukumkanikazi. ILondon i-icon ayisiyiyo kuphela ngenxa yasebukhosini, kodwa ngenxa yokuba yindawo entle ye-LGBT eYurophu. Isixeko yimicocosmos kwihlabathi, Ithetha isixeko esamkela abantu kuzo zonke iimbombo zehlabathi, Ikwafudumele kakhulu kwaye inobuhlobo kwi-gay, isini lesini, Ukumkanikazi, okanye i-transgender.
Ivenkile ezikhethekileyo zeencwadi, iyamangalisa Imivalo yophahla, theatre, kunye nomculo, ILondon ineendawo ezininzi ezonwabisayo ukonwabela okona kubomi be-LGBT kunye nenkcubeko.
ke, ukuba ufuna ukonwabela okona kulungileyo kwe-LGTB eLondon, intloko eDlastone Superstore yeyona cabaret intle. Eyona ndawo ilungileyo yokuma, Indawo yozuko ibalasele, kwaye uqiniseke ngokumisa kwivenkile enkulu ye-LGBT eNgilane, Isitabane liLizwi.
10. Iindawo ezintle ze-LGBT ezinobuhlobo: milan
Ngokungafaniyo nezinye izixeko ezinobungane be-LGBT kuluhlu lwethu, Amalungelo e-LGBT akavumelekanga ngokusemthethweni eMilan. Na lyo line, I-capital kunye nobukhazikhazi behlabathi buqhayisa ngemeko yobungqingili kwaye bade babambe nomnyhadala wefilimu we-LGTBQ.
Xa useMilan, Indawo yasePorta Venezia yintliziyo yobomi be-LGBT kunye nenkcubeko. Kwizitalato zaseLecco naseSan Martini, uyakufumana eyona ndawo ipholileyo kunee-gay kunye neeklabhu.
UFlorence uya eMilan ngoololiwe
EMilan ukuya eFlorence ngoLoliwe
IVenice eMilan ngoLoliwe
Kulula kakhulu ukuqeqesha ukuhamba eYurophu kwaye uhambe ngayo Gcina A Isitimela kodwa akusoloko kulula ukufumana iindawo ezintle ze-LGBT, Kungenxa yoko le nto sibhale le posi yebhlog yakho.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Iindawo ezi-10 eziMangalisayo zeLGBT" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fawesome-lgbt-friendly-destinations%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uzakufumana iindlela zethu ezithandwa kakhulu kuloliwe - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / de ku / fr okanye / es kwiilwimi ezininzi.
isitabane isini lesini I-LGBT Ukhetho lweLGB Izixeko ezinobuhlobo Ukhetho lweLGBTF ngobuhlobo I-LGBTQ IkratshiParadeEurope
Ukwenza Elona Of Uhambo lwakho
5 Eyona Yendalo Zinokuphathwa Springs Aseyurophu
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy